၂၀၂၀ အတွက် ကျပ်တစ်သိန်းခွဲအောက် အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၅ မျိုး by popolay.com
15 May 2020 1,874 Views
အခုလို Covid ကာလမှာ Work from Home လုပ်နေရတဲ့ သူတွေအတွက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ အထက်အရာရှိတွေနဲ့ အွန်းလိုင်းပေါ်ကနေ အစည်းအဝေးတက်၊ ဖိုင်တွေ အပြန်အလှန်ပေးပို့ စတာတွေကို မဖြစ်မနေ လုပ်ရတော့မှာမို့ စမတ်ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးက လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ဈေးလည်းအရမ်းမကြီးပဲနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းမျိုးကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုပြောပြပေးမယ့် ဖုန်းတွေထဲက တစ်လုံးလုံးကို သင်စဉ်းစား ရွေးချယ်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာ ၁၀၀ (ကျပ်တစ်သိန်းခွဲ) အောက်မှာသာရှိတဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၅ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Realme C3
ပထမဆုံးအနေဖြင့် Realme C3 ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ CPU အနေနဲ့ Media Tek Helio G70 ကိုသုံးထားပြီးတော့ RAM က3GB ရှိပါတယ်။ Internal Storage ကို 32 GB တောင် ထည့်ထားပေးသည့်အပြင် SD card အပေါက်အပိုပါရှိသော​ကြောင့် Storage များများလိုချင်တဲ့သူများအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုပါ။
ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ ကျောဘက်ကို 12 MP နှင့်2MP ကင်မရာ ၂ လုံး ထည့်ထားပေးပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာကိုတော့5MP ထည့်ထားပေးထာတဲ့အတွက် ဆယ်ဖီချစ်သူများကို ကျေနပ်မူ့ပေးနိုင်မှာပါ။
မျက်နှာပြင်အကျယ်ကလည်း ၆.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိပြီး HD+ Display ဆိုတော့ လန်းတာပေါ့။ ဘက်ထရီပါဝါက 5000mAh ဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံလောက်နဲ့ ဖုန်းအားကုန်သွားမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ Andriod ဗားရှင်း 10 နဲ့အတူ မြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရေကို ယူဆောင်လာတဲ့ ဖုန်းဖြစ်လို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
၂. Redmi 8A
Qualcomm Snapdragon 439 CPU ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင် အကျယ်က ၆.၂၂ လက်မအရွယ်ရှိပြီး HD+ Display ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် Gamer ဂိမ်မာတွေအကြိုက် ဖြစ်စေမှာပါ။
ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ ကျောဘက်ကို Sony IMX 363 image sensor ပါရှိသည့် 12 MP ကင်မရာ ထည့်ထားပေးတဲ့အတွက် Sony camera တစ်လုံးရဲ့အငွေ့အသက်ကို ခံစားရမှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာတော့ 8 MP Selfie ကင်မရာ သုံးထားပေးပါတယ်။
ဘက်ထရီသိုလှောင်အား 5000 mAh နဲ့ အမြန်ဆုံးအားသွင်းနိုင်တဲ့ USB Type-C အမျိုးအစား 18W အားသွင်းကြိုးကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ဘက်ထရီနဲ့ ပက်သက်လာရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
၃. Ulefone Armor X7
ဖုန်းကို သိပ်ပြီးနုနေစရာမလိုပဲ ပစ်စလတ်ခတ် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လှည့်မကြည့်စတမ်း သုံးချင်သူတွေအတွက် (လုံးဝ) သင့်တော်တာကတော့ Ulefone Armor X7 ပါ။
MediaTek Helio A20 CPU ကို အသုံးပြုထားပြီး မမ်မိုရီ2GB RAM နှင့် သိုလှောင်အား 16 GB ပါရှိပါတယ်။ SD card slot ပါတာကြောင့် ဆန္ဒရှိရင် Memory ထပ်တိုးလို့ရပါတယ်။
မျက်နှာပြင်အကျယ်ကတော့ ၅ လက်မအရွယ်အစားရှိပြီး ပြဲပြဲကားကား Plus size ဖုန်းတွေ မကြိုက်သူတွေအတွက် အနေတော် အရွယ်အစားရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်ကင်မရာကို 13 MP နဲ့ အရှေ့ဘက်ကင်မရာကိုတော့5MP ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
4000 mAh ဘက်ထရီပါရှိပြီး Ulefone Armor X7 ရဲ့ ထူးခြားချက်က အကြမ်းလည်းခံ၊ ရေစိုလည်းခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. Huawei Honor Play 3e
Huawei Honor Play 3e ဟာ မျက်နှာပြင်အကျယ် ၅.၇၁ လက်မရှိပြီး MediaTek Helio P22 CPU ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ RAM2GB နှင့် internal storage 32 GB ပါရှိသည့် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Storage ကို ထပ်တိုးနိုင်ဖို့အတွက် SD card slot တစ်ပေါက်ပါရှိပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ ကျောဘက်ကင်မရာ 13 MP နှင့် အရှေ့ဘက်ကင်မရာ5MP တို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
3020 mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ဘက်ထရီပိုင်းမှာတော့ အနည်းငယ် အားနည်းပါတယ်။ Andriod9အခြေခံထားတဲ့ Huawei ရဲ့ EMUI ကို ထည့်သွင်းမောင်းနှင်ထားပါတယ်။
၅. Doogee X95
နောက်ဆုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ မျက်နှာပြင်အကျယ် ၆.၅၂ လက်မ၊ 19:9 HD+ Display အသုံးပြုထားတဲ့ Doogee X95 ကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
CPU ကို MediaTek Helio A20 အသုံးပြုထားပြီး ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ ကျောဘက်မှာ 13 MP ပင်မကင်မရာတစ်လုံး၊2MP telel နှင့်2MP depth sensor ကင်မရာနှစ်လုံး စုစုပေါင်း သုံးလုံးပါရှိပြီး အရှေ့ဘက်မှာတော့ 13 MP ကင်မရာတစ်လုံးပါရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေ အကြိုက်တွေ့စေမည့် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Android 10 ထည့်သွင်းမောင်းနှင်ထားပြီး 4350 mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Doogee X95 ဟာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် စဉ်စားနိုင်ပါတယ်။
ကဲ အခုလောက်ဆိုရင်တော့ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို သင်စဉ်းစားရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။